Volana - Wikipedia
Ny Volana (marika: ) dia volan'ny Tany. Ny Volana dia satelita natoraly ngeza indrindra eo amin'ny rafitry ny masoandro. Ny halaviran'ny tany amin'ny volana dia misy 384.403 km (in-30n'ny savaivon'ny Tany).
Ny teny malagasy hoe volana dia avy amin'ny fiteny aostronezianina (jereo ny teny malay Bulan [bulan])
Amin'izao fotoana izao, ny Volana ihany no satelita nandehanan'ny olona sy notsidihin'ny olona ary nodiavin'ny olona. Luna I, zanabolana rosiana, no zanabolana voalohany nihodinkodina manodindina ny Volana tamin'ny taona 1959, tamin'io taona io ihany koa dia nipetraka teo amin'ny Volana ny sambondanitra Luna 2, fa potika ilay saondy teo am-pidinana. Tamin'ny taona 1959 ihany nalain'i Luna 3 sary ny sarim-bolana tsy hita maso avy eto an-tany.
Tamin'ny taona 1966, tena vitan'ny Rosiana ny nametraka ny Luna 9 teo ambon'ny Volana, ary mandeha manodidin'ny Volana ny saondy Luna 10 taty aorinana.
I Etazonia ihany ankehitriny no nahavita nandefa olombelona teny amin'ny Volana, araky ny tanjon'ny tetik'asa Apollo izay nanomboka tamin'ny taona 1969 ary tapitra tamin'ny toona 1972. Natsahatra tamin'ny taona 1972 ny programa Apollo. Betsaka ny zavatra nentina avy any amin'ny Volana ary betsaka ny zavatra navelan'ny olona tany amin'ny Volana: ny zavatra nentina avy any amin'ny Volana dia vato isankarazany, ary navela tany amin'ny volana ny jeep sy saondy rehetra. Ankehitriny, ny Volana no planety tena voadinika indrindra amin'ny lafin'ny haikintana 
1 Endrika ara-pizika
1.2 Rafitra anaty
2 Ny tavan'ny Volana
3 Vangio koa
Ny halaviran'ny Volana amin'ny tany dia 384.402 km. Ny savaivon'ny Volana dia 3 474 km, ny fisintonan'ny Tany amin'ny Volana dia 1,95×1020 N eo ho eo. Azo tenenina fa ny Tany sy ny Volana dia lahadroa ara-pajiry.
Kely dia kely ny soson-drivotra eo amin'ny volana.
rafitra anaty ny volana
Hafa ny endrika ny Volana amin'ny resaka jeôsimika, tsy mitovy amin'ny an'ny Tany ny kroty, ny mantely (mentle, manteau) ary ny voany. Ny kroty ny volana dia feno ôksizenina, silisiôma, manieziôma, kalsiôma ary alominiôma. Ny hatevin'ny kroty ny volana dia misy eo amin'ny 50 km eo
Ny tavan'ny VolanaHanova
Manana fihodinana miaraka amin'ny an'ny Tany ny Volana, zany no tsy ahitatsika mihintsy ny tavany lavitra ny Volana.
Ny lafy hitantsika avy eto an-tany dia atao hoe lafy akaiky, na lafy hita, ary ny lafy tsy hitantsika avy eto an-tany dia atao hoe lafy maizina, na lafy lavitra. Ny lafy lavitra dia tsy hoe tsy mazava mihintsy akory; amin'ny tsinam-bolana izao, mazava ny lafy lavitry (na lafy maizin') ny volana. Nalain'ny saondy Luna 3 sary ny lafy maizin'ny Volana tamin'ny 1959.
Lafy akaiky ny volana Lafy alavitra ny volana
Misy fiovàna kely amin'ny fihodinan'ny Volana tsindraindray. 59%n-ny velarana taontalin'ny Volana no hitantsika avy eto an-Tany
Kalandrie ny volana sy daty ny eklipsa
((es)) Fihetsika ny volana * ny phase ankehitriny ny volana
((es)) http://intercosmos.iespana.es/reportajes/luna/luna_principal.htm Archived Aprily 21, 2006 at the Wayback Machine
((en)) Arsiva ny tetikasa apollo
((es))Tetikasa apollo Archived Jiona 2, 2009 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Volana&oldid=1043390"
Dernière modification le 30 Janoary 2022, à 09:51
Voaova farany tamin'ny 30 Janoary 2022 amin'ny 09:51 ity pejy ity.